Musharixiinta Puntland Oo Madaxweyne Ku Xigeenka Ku Taageeray Guddigii Uu Magacabay -Sawirro
Tuesday December 04, 2018 - 14:28:33 in Wararka by Wariye Qoslaaye
War-Saxaafadeed ay Maanta soo saareen 16 ka mid ah musharixiinta u taagan doorashada Madaxweynaha Puntland ayaa taageeray Guddigii ansixinta iyo xalinta khilaafaadka ee uu Magacaabay Madaxweyne ku xigeenka Puntland.
War-saxaafadeed ay soo saareen Musharixiinta ayaa waxay ku sheegeen inay taageerayaan Guddigaas,iyagoo dhinaca kale ka soo horjeestay guddigii uu shalay magacaabay Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Cali Gaas.
Waxay sheegeen in Xubnaha Guddiga ka kooban 8 Xubnood ee uu Magacaabay Madaxweyne ku xigeenka Puntland ay ku yimaadeen wadatashi ayna la shaqeyn doonaan.
Musharaxiinta soo saaray War-saxaafadeedka ayaa waxay kala yihiin:-
C/weli C/maan Geyre .
Talaabada ay qaadeen musharaxiintan ayaa uga sii dareysa khilaafka ka dhex curtay Madaxweynaha Puntland iyo ku-xigeenkiisa oo si weyn looga hadal hayo degaanada Puntland.